အိမ်လုပ်မွေးမြူရေးခြံဆေးထည့်ခြင်း (Just Chilling & Serve!} - ချက်ပြုတ်နည်းများ
ပူစီနံနဲ့ moscow လားဘယ်လိုလုပ်လဲ
လူတစ် ဦး နှုန်း tacos များအတွက်မြေပြင်အမဲသားမည်မျှ
အိမ်လုပ်မွေးမြူရေးခြံဆေးထည့်ရန် သင်တစ်ပုလင်းမှရလိမ့်မယ်ဘာမှထက်လမ်းပိုကောင်းအရသာ။ မည်သူမဆိုဤစာရွက်ကျွမ်းကျင်နိုင်အောင်အလွန်မယုံနိုင်လောက်အောင်လွယ်ကူပါတယ်! လတ်ဆတ်သော (သို့မဟုတ်ခြောက်သွေ့သောဟင်းသီးဟင်းရွက်များ) နှင့်အချဉ်သောမုန့်နှင့်ဒြပ်ထုပမာဏမျှသာအတွက်အမွှေးအကြိုင်ပေါင်းစပ်မှု!
ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှစ်မြှုပ်ခြင်း၊ ပစ်ချသုပ် သို့မဟုတ်အတူတာဝန်ထမ်းဆောင်ဘို့ CrockPot ကြက်သားအတောင် , ဒီရိုးရှင်းသောကျဆင်းလာခြင်းနှင့်တစ်သင်းလုံးကကစားသမားရောနှောသင်ထွက်သွားချင်ကြလိမ့်မည်မဟုတ်သောစွဲလမ်းအဓိကဖြစ်လာသေချာသည်!
ဒီမွေးမြူရေးခြံထဲမှာအရသာရှိတဲ့အရသာရှိတဲ့ဒီမွေးမြူရေးခြံကိုဘယ်သူတီထွင်ခဲ့တာလဲ။ Ranch ဆေးထည့်ခြင်းသည် ၁၉၅၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင် Nebraska Cowboy ဆိုသူက Steve Hensen မှတီထွင်ခဲ့သည်။ သူသည်သူ့ကိုယ်ပိုင် danch မွေးမြူရေးခြံတွင်စာရွက်ကိုပြည့်စုံကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လူကြိုက်များသောကြောင့်မကြာမီသူသည်တစ်နိုင်ငံလုံးရှိသူ၏မွေးမြူရေးခြံအရသာကိုတင်ပို့။ Hidden Valley Ranch ဆေးထည့်ခြင်းကိုမွေးဖွားခဲ့သည်။
ကြက်သားဟင်းချို၏မုန့်နှင့်အတူ scalloped အာလူးနှင့်ဝက်ပေါင်ခြောက်
မွေးမြူရေးခြံတွင်ဆေးထည့်ခြင်းသည်အထူးသဖြင့်ချဉ်သောမုန့်၊ မМайသို့မဟုတ်ရိုးရှင်းသောဒိန်ချဉ် (နှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ထောပတ်) များပါဝင်သော creamy base ရှိကြက်သွန်နီသို့မဟုတ်အရသာရှိသောအရသာများနှင့်အတူ zesty ဟင်းသီးဟင်းရွက်များပေါင်းစပ်ထားသောအရာဖြစ်သည်။ မည်သည့်နေရာတွင်သင်အသုံးပြုပါစေမွေးမြူရေးခြံတွင် ၀ တ်ဆင်ခြင်းသည်အနှစ်သက်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤစာရွက်သည်ချဉ်သောမုန့်နှင့် mayo ကိုအသုံးပြုသည်။
၎င်းသည်အမေရိကန်အိမ်ထောင်စုတိုင်းတွင်အဓိကကျသည်။ အဘယ်သူသည်ပီဇာအပေါ်ယံလွှာကနေအထိအရာအားလုံးအပေါ်မွေးမြူရေးခြံတစ်သင်းလုံးကကစားသမားကိုအသုံးပြုဖို့ကိုမချစ်ပါဘူး ကျွဲအတောင်များ ? ငါလုပ်ပေးတယ်သိတယ်
ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်နံ့သာမျိုးကိုအတူတကွရောမွှေပါ။ ထိပ်ဖျား: ခြောက်သွေ့မှုကိုသုံးလျှင်သင်ခြောက်သွေ့သောအရောအနှောကိုရှေ့တွင်ပြုလုပ်နိုင်ပြီး၎င်းကဲ့သို့သွားရန်အဆင်သင့်ပြုလုပ်နိုင်သည် အိမ်လုပ်မွေးမြူရေးခြံရာသီရောနှောခြင်း ။
အအေးမိချိန်အထိအေးပြီးအရသာများရောစပ်ပြီးအနည်းဆုံး ၁ နာရီ!
အိမ်လုပ်မွေးမြူရေးခြံ ၀ တ်ဆင်ခြင်းသည်သင်၏နို့ထွက်ပစ္စည်းကောင်းသောနေသမျှကာလပတ်လုံးရေခဲသေတ္တာထဲတွင်ရှိနေလိမ့်မည်။ သင်၏အချဉ်ရည်နှင့်နို့ရက်စွဲများကိုစစ်ဆေးပါ။ သင်တစ်သင်းလုံးသည်အ ၀ တ်လျှော်မည်ကိုသင်သိနိုင်သည်။ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာချဉ်သောမုန့်၊ မေယိုနှင့်နို့အရောအနှောများဖြင့်သိုလှောင်ထားရမယ်။
သင်၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအရာများကိုထည့်ရန်ဤစာရွက်ကိုအလွယ်တကူပြောင်းနိုင်သည်။ ဒီကျဆင်းလာစေရန်နို့ကိုလျှော့ချပါ။ သင်၏စိတ်ကူးကိုအသုံးပြုပါ၊ ၎င်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန် (သင် Ranch Dressing purist တစ်ယောက်မဟုတ်လျှင်)!
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ... ဘေကွန်, ငါ့သူငယ်ချင်း, ဘေကွန်!
ထုခွဲထားသော parmesan သို့မဟုတ်အိမ်သုံးသုံးဒိန်ခဲ Ranch အတွက်ဒိန်ခဲအမျိုးမျိုးကိုပေါင်းထည့်ပါ။
ပြီးပြည့်စုံသော jalapeno မွေးမြူရေးခြံအတွက် Jalapeno ငရုတ်ကောင်း (ကျွန်ုပ်ချဉ်။ ကြမ်းတမ်းတောက်ပသည်။ )
အချို့သော zest များအတွက် pickle ဖျော်ရည်တစ် splash!
ဒါမှမဟုတ်သင်ကအရသာရှိတဲ့တစ်ခုခုကိုတပ်မက်နေမယ်ဆိုရင်သင်ဟာနင်းနယ်နေတဲ့ငရုတ်သီးထဲကိုထည့်လို့ရပါတယ်။ ထိုအခါငါနောက်ဆုံးမိနစ်သို့ကျဆင်းလာသို့မဟုတ်မည်သည့်အခါသမယများအတွက်တစ်သင်းလုံးကကစားသမားလိုအပ်သည့်အခါတိုင်းငါအလျင်အမြန်နဲ့အလွယ်တကူလူတိုင်းရဲ့အကြိုက်ဆုံးမွေးမြူရေးခြံတစ်သင်းလုံးကကစားသမားကိုအတူတကွထားနိုင်ပါတယ်သိ။ ကိုချစ်! ယနေ့ညသင်၏မိသားစုနှင့်အတူပျော်ရွှင်ပါ။
အပြာရောင်ဒိန်ခဲတစ်သင်းလုံးကကစားသမား - ကြက်တောင်ပံအဘို့အပြီးပြည့်စုံသော
အီတလီတစ်သင်းလုံးကကစားသမား - အရာအားလုံးအပေါ်ကြီးသော
ပျားရည်မုန်ညင်းတစ်သင်းလုံးကကစားသမား - ငါ့အကြိုက်ဆုံးတစ်ခု
သောင်းချီကျွန်းတစ်သင်းလုံးကကစားသမား - ဘာဂါများအတွက်စုံလင်သည်
ပြင်ဆင်ချိန်၁၀ မိနစ်များ အေးဆေးအချိန်နှစ် နာရီ စုစုပေါင်းအချိန်နှစ် နာရီ ၁၀ မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၁၆ ဇွန်း စာရေးသူHolly Nilsson ဤ Ranch ဆေးထည့်ခြင်းသည်အသုပ်သို့မဟုတ်လတ်ဆတ်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်တုတ်များအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောအချဉ်၊ ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢1 ¼ ခွက် မေonnaise
▢½ ခွက် ဒိန်ချဥ်
▢⅓ ခွက် နို့
▢နှစ် ဇွန်း လတ်ဆတ်သောသံပုရာဖျော်ရည်
▢½ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ကြက်သွန်ဖြူအမှုန့် လတ်ဆတ်တဲ့ 1 လေးညှင်းပွင့်
▢½ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ခြောက်သွေ့သောဇီယာစေ့ပေါင်းပင် သို့မဟုတ် 1 လက်ဖက်ရည်ဇွန်းလတ်ဆတ်
▢တစ်ခု လက်ဖက်ရည်ဇွန်း parsley အခြောက်လှန်း သို့မဟုတ်2လက်ဖက်ရည်ဇွန်းလတ်ဆတ်
▢တစ်ခု လက်ဖက်ရည်ဇွန်း chives ခြောက် သို့မဟုတ်¼လက်ဖက်ရည်ဇွန်းကြက်သွန်အမှုန့်
အမှုမထမ်းခင်အနည်းဆုံး ၂ နာရီအအေးခံပါ။
သော့ချက်စာလုံးမွေးမြူရေးခြံတစ်သင်းလုံးကကစားသမား သင်တန်းဒိုင်, တစ်သင်းလုံးကကစားသမား ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုကော်ပီကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝပိတ်ပင်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။